Jubbada Hoose - Wikipedia
Caasimada gobolka Kismaayo
Jubbada Hoose (Af Ingiriis : LowerJubba, Af-Carabi: جوبا السفلى‎) waa gobol ka tirsan wadanka Soomaaliya, kaasi oo looyaqaano Waamo waxuu dhacaa xadka wadanka Kenya, Gobollada Jubbada Dhexe iyo Gedo waxaa magaalo madax u ah magaalada Kismaayo
4 Xaafadaha ugu weyn
Jubbada Hoose waxaa uu ku yaallaa koonfurta Somaaliya gobolka waxuu xad la leeyahay Kenya, gobollada Soomaalida ee Gedo, Jubbada Dhexe, iyo badda Soomaaliya. Gobolka waxaa loogu magac daray Wabiga Jubba ee mara oo ku shubma badda Soomaaliya ee Goobweyn. Beerta Qaranka Lag Badana National Park waxay ku taal Jubbada Hoose. Waxay leedahay kaymo cagaaran iyo xayawaanada duurjoogta ah sida libaaxa, geriga, jeerta, waraabaha iyo yaxaaska.
Si kastaba ha ahaatee, nuskii dambe ee qarnigii 19-aad, qoysas aad u yar oo Daarood ah ayaa soo degay magaalada Kismaayo. Qarnigii 20-aad ee horraantii, waxay aasaaseen xarumo ganacsi oo yaryar. Bilowgii dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya, Kismaayo oo loo yaqaanno Waamo waxay la kulantay burbur xooggan oo eey gaarsiiyeen hoggaamiye kooxeedyadii u dhexeeyay Hawiye iyo Daarood mid kastaa wuxuu sheeganayay lahaanshaha gobollada Jubbada Hoose & Jubbada Dhexe. Laakin dhanka kale, magaaladu waxa ay markaa ka dib isu rogtay dhaqaale ahaan xudunta u ah ganacsiga xoolaha. Qabaailka Harti ee ugu waaweynaa ee Kismaayo wax ka dhisay waxay ahaayeen ganacsato Majeerteen ah oo ka soo jeeda waqooyi-bari Raas Xaafuun, kuwaas oo loo yaqaaney 'Hafuuni. Labaatankii sano ee ugu horreeyay qarnigi 20-aad, waxaa ku biiray xubnaha beesha Ciid-Nugaal, ama Si'iid Harti ama reer darawiish Harti.
Waxaa ka mid ah in labada gobol ay u muuqdaan kuwo ay degan yihiin qoysas aan deganeyn tan iyo markii uu bilowday nidaamka federaalka ee dalka oo dhan. Intaa waxaa dheer, si daacad ah Wikipedia, profile-ka gobolladaas waxaa lagu soo bandhigay asal xog been ah. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xaqiiqada iyo xogta laga helayo buugaagta I M Lewis ee ku saabsan gayiga Soomaalida iyo Prof Axmed Ismaaciil Samatar.
Intii u dhaxaysay 1974-kii ilaa 1975kii, waxaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya ka dhacay abaar aad u weyn oo loo yaqaanno Abaartii Dabadheer. Midowga Soofiyeetka, oo markaas xiriirkii istiraatijiyadeed la lahaa dowladdii Siyaad Barre, waxay diyaarad ku soo qaadday ilaa 90,000 oo qof oo ka kala yimid gobolladii abaarta ku dhufatay ee [[Hobyo] iyo Caynaba. Danwadaagaha ("Collective Settlements") ayaa laga sameeyay Jubbada Hoose (Jubbada Dhexe) iyo [Jubbada Dhexe] (Jubbada Dhexe). Qoysaska la beeray ayaa sidoo kale la baray tacabashada beeraha iyo kalluumeysiga, taasoo ka duwan hab-nololeedkoodii hore ee xoola-dhaqatada ee dhaqashada xoolaha.
Gobolka Jubbada Hoose waxaa uu ka kooban yahay 4 degmo:
Jasiiradaha Bajuni sidoo kale waxay ku yaalaan gudaha gobolka.
Xaafadaha ugu weyn[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ Lee V. Cassanelli, The shaping of Somali society: reconstructing the history of a pastoral people, 1600–1900, (University of Pennsylvania Press: 1982), p.102.
↑ Greenstone - Kismayo
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubbada_Hoose&oldid=234558"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Abriil 2022, marka ee eheed 22:23.